Outlander PHEV တစ်သိန်းအရေအတွက် ကို Europe မှာရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Mitsubishi! – AutoMyanmar
Outlander PHEV တစ်သိန်းအရေအတွက် ကို Europe မှာရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Mitsubishi!
Mitsubishi အနေနဲ့ Outlander plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) တစ်သိန်းကို Europe မှာရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Outlander PHEV တွေ U.S မာကတ်က ရောင်းသူကိုယ်စားလှယ်တွေဆီရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှ ဒီကြေညာချက်ကထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Mitsubishi ဟာသူ့ရဲ့ PHEV တွေကိုတော့ Misubishi Motors North America (MMNA) မှာတည်ဆောက်တာပါ။
Outlander PHEV တွေကိုတော့ Europe မှာမဖြန့်ချီခင် Netherlands နဲ့ Scandinavia မှာဉီးဆုံးဖြန့်ချီခဲ့တာပါ။ ဖြန့်ချီတဲ့ဒေသ ၃ ခုလုံးမှာ ၂၀၁၅ခုနှစ် ကနေ ၂၀၁၇ခုနှစ် အထိရောင်းအားအကောင်းဆုံး PHEV အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ U.S မာကတ်မှာရောဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဉီးမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Mitsubishi ရဲ့ Outlander PHEV ဟာတော့ ရာဇဝင်နဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှာ Four-Wheel drive (4WD)၊ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ electric powertrain တွေပါဝင်လာပြီး ၂၉၈၂ ခုနှစ်မှာတော့ SUV အဖြစ်ရပ်တည်လာတာပါ။ အဲလိုကနေတဖြည့်ဖြည်းနဲ့ PHEV အဖြစ်ပြောင်းလဲရပ်တည်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PHEV ကတော့ လျှပ်စစ်သီးသန့်ကား (EV) ကနေပြောင်းလဲဖွံဖြိုးလာတာပါ။ အဲ့တာကြောင့် PHEV မှာလည်း EV လိုမျိုး လျှပ်စစ်မော်တာတွေပါဝင်နေမှာတော့အသေအချာပါပဲ။
Outlander PHEV ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ အားသွင်းစွမ်းရည်မြန်ဆန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၅ မိနစ် နဲ့ ၃၀ မိနစ်ကြား အားသွင်းရုံနဲ့ ကားအတွက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိအားပြန်ပြည့်သွားမှာပါ။ နောက်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ ခရီးအရည်ကြီးသွားတာတောင်လောင်စာကုန်ခမ်းမှုနှေးတာဖြစ်ပါတယ်။ လောင်စာကုန်ခမ်းမှုနှေးကွေးသလို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကလည်း အနည်းငယ်သာရှိတာကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလည်းအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ကားရဲ့ အတွင်းပိုင်းအရွယ်အစားကကြီးနေတာကြောင့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၅ ယောက်အထိကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းထိုင်နိုင်ပြီး အနောက်ဖုံးမှာပါထိုင်မယ်ဆိုရင် ၇ ယောက်အထိရပါတယ်။ မိသားစုလိုက်ခရီးသွားဖို့ အသင့်တော်ဆုံးကားပါပဲ။ အဲ့လိုအချက်တွေကြောင့်ပဲ Outlander PHEV ရဲ့ရောင်းအားဟာ Europe မှာအခုလိုထိပ်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ၂၀၁၈ Outlander PHEV ဆိုရင်လက်ရှိ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး plug-in hybrid electric utility vehicle အဖြစ်ရပ်တည်နေပြန်ပါတယ်။ Mitsubishi ရဲ့ Outlander PHEV အောင်မြင်မှုကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။
Check out the eco-friendly and wallet-friendly #2018 #Mitsubishi #Outlander #PHEV! https://t.co/D9IFR6NhrD pic.twitter.com/Uompvz5pDc
— Goldstein Mitsubishi (@GoldsteinMitsu) January 31, 2018